अपरेटिङ सिस्टम बुट समस्या असामान्य छैन। र कुनै तरिका यो आफ्नो प्रदर्शन संग जोडिएको छ। यो पनि पनि हार्ड डिस्क (म / हे त्रुटि) आरम्भ छ छैन वा अन्य कुनै पनि समस्या छन् हुन्छ। यस लेखमा केहि विशिष्ट परिस्थिति र समाधान तिनीहरूलाई लागू छलफल गरिनेछ। breakdowns वा हार्ड ड्राइभ को शारीरिक गिरावट सम्बन्धित मुद्दाहरू छलफल हुनेछैन भन्ने तुरुन्त आरक्षण, साथै भाइरल संक्रमण।
हार्ड डिस्क आरम्भ भएको छैन: सम्भव समस्या
सबै भन्दा साधारण अवस्था breakdowns सम्बन्धित छ। तिनीहरूलाई पछि छलफल गरिनेछ। तर क्षणमा, तपाईं हार्ड डिस्क सही आरम्भ छ किन, वा सबै परिभाषित छैन रूपमा धेरै विकल्पहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटै वेब मा वर्णन गरिएको छ कि सबै बीच, यो उल्लेख गर्न सकिन्छ अलग धेरै अवस्थाहरू:
यस BIOS मा गलत बुट प्राथमिकता;
डिस्क मा त्रुटिहरू;
अपरेटिङ सिस्टम असफल।
पहिलो स्थानमा के: हार्ड डिस्क सुरु छैन?
सुरु गर्न, विशिष्ट त्रुटि विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ WD हार्ड ड्राइभमा आरम्भ हुँदा एक अवस्था छ मानौं। यस मामला मा, प्रणाली बस "थूकना।" हार्ड डिस्क आरम्भ छ बताउँदै एक सन्देश (सीआरसी त्रुटि), प्रणाली विभाजन विफलता भयो मात्र संकेत हुन सक्छ, र कुनै तरिकामा यो एउटा हार्ड ड्राइभमा श्रेय गर्न सकिँदैन (वा बरु, आफ्नो अवस्था)।
प्रणाली बुट कि हार्ड ड्राइभमा आरम्भ भएको छैन संकेत सन्देश प्रदर्शन र सञ्चालन प्रणालीको लोड सम्भव छैन जब, सुरु गर्न, BIOS मा सुरु विकल्प (प्राथमिक इनपुट / उत्पादन प्रणाली) जाँच गर्नुहोस्। यो भनेर एउटा सन्देश प्राप्त गर्दा प्रयोगकर्ता पाठ कि अपरेटिङ सिस्टम बुट उपकरण फेला परेन संकेत देख्ने धेरै सम्भावना छ।
समावेश गर्न BIOS सेटिङमा हार्ड ड्राइभ (बूट उपकरण प्राथमिकता - हार्ड ड्राइभ) बाट बुट गर्न - त्यसैले, निर्णय सजिलो सुझाव।
डाउनलोड को विफलता को घटना मा तपाईँले पहिला सीआरसी रेकर्ड, माथि उल्लेख गरिएका छन् जो जाँच गर्न आवश्यक छ। यो त्रुटि अनप्याक गर्दा पूर्ण डाउनलोड छैन कार्यक्रम फाइलहरू winrar कहिलेकाहीं अवलोकन गर्न सकिन्छ के मिल्दोजुल्दो छ।
सिद्धान्त मा, स्थिति नै छ। तर, प्रणाली जूता, यो काम गर्दछ भने, तपाईं केवल सुरुमा प्रदर्शन गर्न आवश्यक जब एक डिस्क चेक , स्वचालित त्रुटि सुधार संकेत (यो स्पष्ट छ कि ढाँचा प्रणाली विभाजन सामना गर्न सक्दैन छ)।
विन्डोज हटाउन सकिने मिडिया बाट लोड गरिएको छ भने ...
घर सिस्टम एक हटाउन सकिने यन्त्र द्वारा बुझे गर्न सकिन्छ (वा OS वा बुट उपकरणको सेट)। यस मामला मा तुरुन्तै, अनिश्चितकालीन मामला postponing बिना, तपाईं एक चेक गर्न आवश्यक छ। यसो गर्न, तपाईं निर्मित कमाण्ड, र तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
साधारण मामला मा, उदाहरणका लागि, जब दोस्रो सिस्टम भर्चुअल डिस्क मा स्थित छ (हेर्नुहोस्), चेक आउट नै टोली chkdisk डिस्क लेबल संकेत द्वारा लगे हुन सक्छ। तर, अभ्यास शो रूपमा, समस्या सामान्यतया पनि छ।
यदि बाह्य हार्ड ड्राइभ संग आरम्भ भएको छैन, निर्मित, कम्तिमा सुरु जडान केबल जाँच गर्न हुनेछ उल्लेख छैन। तर यो, यो बाहिर जान्छ रूपमा, छैन मुख्य समस्या छ। सायद, बाह्य उपकरण स्थापित उचित चालक बस छैन वा तिनीहरू सही काम गरिरहेका छैनन्। र गर्न सक्छन्, र उपकरण नै मा छैन, केवल छ।
जाँच बाह्य मिडिया मानक "उपकरण प्रबन्धक", को "कन्ट्रोल प्यानल" कुनै पनि कारण छ, जो मार्फत काम गर्न सक्छन्, या त कुनै पनि विन्डोज सिस्टम मा उपलब्ध छ जो कन्सोल devmgmt.msc, "रन", देखि (यो सामान्य "सुरुवात" मेनुमा मार्फत चलाउन सकिन्छ)।
प्रणाली छैन बुट गर्छ भने: आदेश लाइन को स्थिति जाँच
प्रणाली लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, हार्ड डिस्क ड्राइव को कुनै पनि प्रकारको परीक्षण गर्न, यो यस्तो LiveCD वा पनि विन्डोज वितरण, सट्टा बाह्य मिडिया HDD खुला बुट गर्न अनुमति दिने, एक बुट क्षेत्र छ जो रूपमा उपयोगिता को प्रयोग संग एक सर्किट वाहक डाउनलोड गर्न विकल्प प्रस्ताव गर्न सम्भव छ।
तपाईं Alt + F10 प्रेस वा चयन गर्न सुरु प्रक्रिया मा एक Windows वितरण, प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पुन: कन्सोल बटन «आर»। अर्को, आदेश लाइन sfc / scannow (यो कम्तिमा सुरु गर्न) दर्ता गर्न आवश्यक छ। यो विस्तारित संस्करणमा MBR पुनर्निर्माण लागू गर्न आवश्यक छ:
Bootrec.exe / FixMbr।
Bootrec.exe / RebuildBcd।
आवेदन लागि अन्तिम आदेश आवश्यक छैन र केवल बुट क्षेत्र (क्षेत्र) अधिलेखन गर्न प्रयोग।
विन्डोज-प्रणाली को पुनर्स्थापना गर्न काम गर्न सक्ने आवेदन सन्दर्भमा, त्यसपछि निर्णय प्रयोगको गाह्रो हुन्छ।
कार्यक्रम जस्तै - कम से कम हामी बुट गर्न उपकरण, र त्यसपछि सिफारिश गर्न सक्छन् HDD सुधारनेवाला। यो डस-मोडमा चलिरहेको एउटा आवेदन, हार्ड डिस्क जस्तै आरम्भ भएको छैन भने पनि, तथाकथित सहनुपरेको ड्राइव उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ।
यो HDD प्रयोगकर्ता मा बुट क्षेत्र देख्नुहुन्छ कि बुझ्ने गरिन्छ। CATEGORY सुरु कार्यका लागि छुट्याइयो, अधिक त। अधिकतम - यो स्वाप फाइल। र यो छ - मुख्य समस्या छ। यो पनि डाटा लोड राम पर्याप्त छैन जब लागि जिम्मेवार छ कि तपाईँको हार्ड ड्राइभमा एक सुरक्षित ठाउँ फाइल थिएन भन्ने तथ्यलाई। त्यहाँ "राम" को पर्याप्त रकम छ भने पहुँच राम नै सञ्चालन भन्दा धेरै छिटो हार्ड ड्राइभ लागू हुन्छ किनभने, सबै बन्द गर्न सकिन्छ।
तर जानकारी पुनर्स्थापना। यो तपाईं यो गर्न अनुमति दिन्छ कुनै पनि कार्यक्रम प्रयोग गर्न पर्याप्त छ। सबैभन्दा शक्तिशाली को एक R.Saver उपयोगिता मानिन्छ। तर, यो एक pre- उत्पादन मनमोहक छ सुरक्षित मोडमा बुट , वा कम से कम यदि सम्भव फिर्ता प्रणाली रोल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
सामान्य मा, यस्तो दृष्टिकोण, समस्या धेरै केही त्रुटिहरू र ग्लिचहरू बुट रेकर्ड सहित समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यस्तो विकल्प काम गर्ने छैनन्, तपाईं ड्राइभ (HDD) ढाँचाबद्ध हुनेछ। तर यो प्रयोग गर्न पनि आदेश रेखा मा बुट क्षेत्र लायक छ अधिलेखन।
साथै, तेस्रो-पक्ष उपकरण को प्रयोग MBR समाधान गर्न सक्छन् बिना प्रणाली आज्ञा। एक चरम अवस्थामा यो ढाँचा खण्ड प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कि पछि आवश्यक जानकारी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। तर केवल क्षेत्र मा rewriting प्रदर्शन गर्न गरिएको छ कि हालत मा, कि हुन्छ, त्यहाँ कुनै डाटा को मेटाउने पछि फाइलहरू बचत थियो। अन्यथा, राम्रो केही यो आउनेछ। तर ... तपाईं जसरी सक्छन् केहि गर्न प्रयास गर्नुहोस्। गलत केही हुन छैन।
परिणाम के हो?
यसलाई यदि यो सबै निर्धारण गरिन्छ, त्रुटिहरू लागि डिस्क जाँच गर्न आवश्यक भएको विश्वास गरिन्छ संग, सुरु गर्न। अर्कोतर्फ, प्रारम्भ सम्भव छैन भने, यो HDD डाटा रिकभर गर्न सक्ने विशेष कार्यक्रम को प्रयोग आवश्यक छ, र कार्यक्षेत्र मा लोड गरिएको। तर पनि हटाउन सकिने मिडिया देखि booting, तपाईं सिस्टम स्टार्टअप सम्बन्धित समस्या धेरै हल गर्न सक्छन्।
यसलाई सुरक्षित डिस्क रूपमा सामूहिक भाइरस को प्रभाव, डिस्क कार्यक्रम बाहेक गर्न आउँछ भने, र केहि सल्लाह गर्दैन। तिनीहरूले "Kaspersky ल्याब" र "डाक्टर वेब" मा अवस्थित। तल लाइन तिनीहरूले आफ्नै इन्टरफेस प्रणालीको सुरु गर्नु अघि, स्मृति, केवल हार्ड ड्राइभ स्क्यान गर्दा पनि लोड छ (भाइरस, कुनै पनि अन्य कार्यक्रम जस्तै, हाल कार्यान्वयन यसलाई फाइलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ)। यसरी, के बुट हार्ड डिस्क मा कहिले काँही छ को समस्या आरम्भ भएको छैन, यो यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित हुन सक्छ।
तर तपाईं पछिल्लो एक टिप दिन भने, यो सबै भन्दा राम्रो आदेश रेखाबाट आदेश प्रमाणिकरण र पुन: प्रयोग गर्न छ। त्यो डस-मोड मा काम गर्दछ हुनत, तर, यो कहिल्यै असफल र कुनै कुरा तपाईं कसरी कठिन प्रयास गर्नुहोस्, प्रणाली समाधान गर्न पारंपरिक हालतमा सही हुन सक्छ कि पनि ती समस्या अनुमति दिन्छ। एक चरम अवस्थामा, डिस्क जडान चरण मा छ भने, तपाईं डिस्क व्यवस्थापन खण्ड उल्लेख र उपयुक्त प्रारम्भ आदेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Latinism आदि।: संक्षिप्तरूपहरूप्रयोगगर्नुहोस् को स्पष्टिकरण
को जीत-सर्भर के हो?
सैमसंग ग्यालेक्सी S3 कसरी फ्लैश गर्न? चिनियाँ फ्लैश सैमसंग ग्यालेक्सी S3
त्रुटि 0x8007045d: कारण र सुधार को तरिका
गाइड: कसरी "एन्ड्रोइड" फाइल प्रबन्धक मा स्थापना
लक्षण र कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षण
"Svetlogory" नाम अन्तर्गत नैतिकता - मूलतः बेलारुसबाट एक पनीर
वोल्गोग्राड प्रशिक्षण हल्स: ठेगानाहरू, समीक्षाहरू
व्लादिमीर Bolshov: जीवनी र सिनेमा
अरेगनो एक ओरेगनो हो